Farmaajo “Dalkeenna Maanta waxaa uu la tacaalayaa halis Caafimaad” | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Farmaajo “Dalkeenna Maanta waxaa uu la tacaalayaa halis Caafimaad”
Farmaajo “Dalkeenna Maanta waxaa uu la tacaalayaa halis Caafimaad”
Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Maalinta Shaqaalaha Adduunka awgeed waxaa uu Maanta hambalyo u diray dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed.
Farmaajo ayaa Shaqaalaha Soomaaliyeed uga mahad-celiyay sida ay uga shaqeeyeen dib u dhiska iyo horumarinta dalka, laga soo bilaabo dadaalladii wax ku oolka ahaa iyo doorkii taariikhiga ahaa ee ay ku leeyihiin halgankii xurnimo doonka.
“Waxa ay maanta oo kale mudnaayeen maamuus, dabaaldegyo, kulamo lagu sharfayo iyo guddoonsiin billad shara, laakiin nasiib xumo saamaynta uu keenay caabuqa COVID-19 darteed suurtogal inooma ahan arrimahaasi” ayuu yiri Madaxweynaha.
Waxaa uu sheegay Farmaajo in dalka maanta waxaa uu la tacaalayo halis caafimaad oo uu sababay cudurka COVID-19, kaas oo dunida oo idil ku yeeshay saamayn xoog leh oo dhinacyada caafimaadka, dhaqaalaha iyo guud ahaan nolasha bulshada.
Dhammaan caqabadaha ku xeeran dalka ayuu shegay Madaxweynaha dalka in loo baahan yahay in la laba-laabo dadaalka iyo waxqabadka, isla markaana loo midoobo, si loo xaqiijiyo hiigsiga ku aaddan dal horumarsan oo barwaaqo ah.
“Dawladdu waxa ay xoogga saartay Ilaalinta xuquuqda iyo sharafta shaqaalaha Soomaaliyeed, annagoo mudnaanta siinay kor u qaadidda fursadaha shaqo ee dhallinyarada. Waxaan xaqiijinay inaan siinno Shaqaalaha Dowladda xuquuqdooda mushahar bil walba, taas oo aan uga golleenahay yareynta shaqo la’aanta ka jirtay dalkeenna, waana ku dadaalaynaa sidii guri kasta oo Soomaaliyeed u heli lahaa dhaqaale uu ku maareeyo noloshiisa” ayuu sii raacsiiyay hadalkiisa Madaxweyne Farmaajo.
Maqaal horeRooble “Xukuumaddeydu waxay xoogga saareysaa horumarinta xirfadda”